ဇလုံတောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Copy/Paste » ဇလုံတောင်	0
Posted by သျှားသက်မာန် on Feb 8, 2016 in Copy/Paste, Local Guides, Travel |0comments
ဗန်းမောက်မြို့ အနောက်မြောက်ဖက်တွင် ရှိသော ကျောက်တောင်တစ်လုံးဖြစ်သည်။ ကျောက်တောင်၏ တည်ရှိနေပုံ ဆန်းကြယ်မှုနှင့်တည်ထားသော ဘုရားတို့ကြောင့် ထင်းရှားသည်။ ဓာတ်ပုံကို မြင်ရုံနှင့် လာချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ညှို့ဓာတ်ရှိသည်ဟု ခေါ်နိုင်သည့် တောင်တစ်လုံးဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း၌ ထူးကဲ့သော ဂုဏ်တန်ခိုး တော်နှင့် ပြည့်စုံသော ဇလုံတောင် စေတီတော်ကြီးမှာ မွန်ပြည်နယ်မှဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်ကြီးနှင့် ပမာတူစွာအံ့ဖွယ် ထူးခြားသော ဉာဏ်တန်ခိုးတော် တို့နှင့် ပြည့်စုံသော သမိုင်းဝင်စေတီတော်ကြီး တစ်ဆူ ဖြစ်ပါသည်။
ပင်လယ်ရေ ပြင်ထက် အမြင့်ပေ (၃ဝ၉ဝ) အမြင့်ရှိသော သေလာ ပဗ္ဗက တောင်ထိပ်ပေါ်ဝယ်
ထူးတင့်စွာ ဖူးမြော်ခွင့်ရသော ဇလုံတောင် စေတီတော်ကြီးမှာ သမိုင်းအခြေခံ တောင့်တင်းခဲ့သည်။ သမိုင်း အဖြစ်တော်စဉ် အရ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဝါတော်(၂ဝ)အရ မဟာသက္ကရာဇ် (၁၂၃)ခုနှစ်၌ သိကြားမင်း ဖန်ဆင်းအပ်သော နတ်ပန်းရထားဖြင့် ရဟန္ဓာ(၅ဝဝ)ခြံရံပြီး ဧရာပထနတ် နဂါးသားအဖ လှူဒါန်းသော ဇလုံတောင်သို့ ကြွရောက်တော်မူခဲ့သည်။ ဤသို့သော မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ၏ ဆင်းသက်မှုအရ သက္ကရာဇ်(၄၉၂) ခုနှစ်၌ အရှင်အရဟံနှင့် အရှင်အာစရ ဘွဲ့မည်ရသော ရဟန္တာ (၂)ပါး ဇလုံတောင်သို့ ကြွတော်မူပြီးတောင်၏အမြင့်ဆုံး ကျောက်စာတွင် ဖေါ်ပြထား သည်။
မွန်ပြည်နယ်မှ တန်ခိုးကြီးလှသော ကျိုက်ထီးရိုး ဆံတော်ရှင်ကဲ့သို့ သဘာဝနှင့်တောတောင်ရေမြေ သာယာ လှပမှုများ ဆင်တူနေသော ဇလုံတောင်တော်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ကသာခရိုင်၊ဗန်းမောက် မြို့နယ်တွင်တည်ရှိပြီး ဗန်း မောက်မှ (၁၂)မိုင်၊ (၂)ဖာလုံ ခန့်အကွာ တောမြိုင်လယ် တွင်တည်ရှိ၏။
နှစ်စဉ်ဆောင်းရာသီနှင့် နွေရာသီ ကာလတွင် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ဘုရားဖူးတို့စုံညီစွာလာရောက်ဖူးမြော်ကြသည်။ဗန်းမောက်မြို့မှ မြေသားကားလမ်း အတိုင်းကားဖြင့်သွားကြရသည်။ ကျွန်းပင်ကြီးများ အင်ပင်ကြီးများက အုံ့ဆိုင်းသာယာ၍သဘာဝတောတောင်ရေမြေ၊ စိမ့်စမ်းရေတို့က ဝန်းကျင်အနှံ့ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့စေ၏။ ဇလုံတောင်သို့ တက်ရာတောင်တက်လမ်းတစ်လျှောက်ဝယ် တယ်ပင်ပြန့်စခန်းမှာ ဘုရားဖူးတို့အဆင်းနှင့်အတက် နားခိုရာ ငြိမ်းချမ်းသော ရပ်ဝန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး နားခိုသူတို့အတွက်ရေချိုးစရာနှင့် အပန်းဖြေ စားသောက်စရာ စားသောက်ဆိုင် တန်းတွေလည်း စုံလင်လှ၏။ ထိုတယ်ပင်ပြန့်စခန်းတွင်တောင်ပေါ်သို့ တက်ရောက် လာကြသော ကားများ၏ အဆုံးအစခန်းလည်းဖြစ်သည်။
ဒေသန္တရဗဟုသုတကို လေ့လာရှာမှီးကြသော ဘုရားဖူးများမှာ တယ်ပင်ပြန့်မှ လူသွားကျောက်ခြပ်တို့အကြားမှတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ တက်ရောက်ကြရသည်။ ဇလုံ တောင် ဝန်းကျင်၌ ကမ္ဘာ့အံ့စရာတစ်ခုနှယ်မြင်တွေ့ကြရသောကျောက်မဏ္ဍပ်ကြီး ကလည်း အံ့မခန်းစရာပင်။ ထိုကျောက်မဏ္ဍပ်၌ရှေးပဝေသဏီနှစ်ပရိစ္ဆေဒကတည်းကကျောက် ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများအဖြစ် မြင်တွေ့နေရဆဲဖြစ်သော ကျောက်ဆန်အိတ်ကြီး များကလည်းအံ့သြစရာကောင်းပါသည်။
အကျယ် အဝန်းကြီးမားလှသောကျောက်မဏ္ဍပ်ကြီးပေါ်၌စေတီငယ်များနှင့် ဗုဒ္ဓရုပ်ထုတော်တို့ကလည်း
တောဆေးတောမြစ်တို့ စုံလင်လှ၏။ တောရဆောက်တည်၍ တရားရှာမှီးကြသည့် ယောဂီသူတော်စင်နှင့်
ရဟန်းတော်တို့ အနေအစားချို့တဲ့စွာနှင့် တပအကျင့်ကို ကျင့်ကြံ လျှက်ရှိကြသည်မှာ တောရ၏ စိတ္တဝိဝေကတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဇလုံတောင်ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲကြီးဇလုံတောင် ဘုရားပွဲတော်ကြီး ကျင်းပပူဇော်ပုံမှာ ထေရဝါဒဆန်လှ၏။ ဇာတ်ပွဲ၊
အငြိမ့်သဘင်နှင့် စတိတ်ရှိုးစသော ကိလေသာကို ဇောင်းပေးသော ပူလောင်မှုများထည့်သွင်းမထားဘဲ ဓမ္မတရားသဘင် များသာ ပါဝင်သဖြင့် ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်ရသည်။
ယခုနှစ်၌ (၁၈)ကြိမ်မြောက် ဗုဒ္ဓပူဇနိယ ပွဲတော်ကြီးကို (၂၃၊၄၊၂ဝ၁ဝ)နေ့မှ (၂၇၊၄၊၂ဝ၁ဝ)နေ့အထိ ကျင်းပ ပူဇော်ခဲ့သည်။ သံဃာတော်များမှ အသံမစဲ ပဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ ပါဝင်သလိုဒုလ္လဘ သံဃာ(၇ဝ)ကျော် ဝတ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် သာသနာနွယ်ဝင် သီလရှင်ဝတ်ပွဲကလည်း ဘာသာရေး၏ အခြေခံအုတ်မြစ် တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ထို့ပြင် ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော် များအားအနေကဇာတင်ပွဲနှင့် ညောင်ရေ သွန်းလောင်းလှူပွဲများ ထည့်သွင်း ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
Shar Thet Man has written 158 post in this Website..
View all posts by သျှားသက်မာန် →	Blog
LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.
Comments By Postအမြန်လမ်း-ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီလား - Thint Aye Yeik - kaiအမေ့မျက်နှာ တစ်ရွာထင်ပါလို့ . . လိုက်ခဲ့တယ် . . လိုက်ခဲ့တယ် - aye.kk - Thint Aye Yeikဘာရယ်ဟုတ်ဘူး... - aye.kk - ၀င့်ပြုံးမြင့်လမ်း၌ယဉ်ကျေးမှု(၃)-အမှိုက် ၂(Seminar on Disposal ) - aye.kk - padonmarဟောတော့ ... - Ma Ei - ဇီဇီနေ့ ချင်းပြန်သွားလို့ရတဲ့ အေးချမ်းလတ်ဆတ်မှုကိုအပြည့်အ၀ခံစားရမယ့် ရွှေပြည် - kai - သျှားသက်မာန်ယဉ်ကျေး Respect လူ့ပညတ် - kai - Thint Aye Yeikနာဂတောင်တန်းတွေဆီက ပျံ့လွင့်လာတဲ့တေးသွားများနဲ့နှစ်ကူးပွဲတော် - Thint Aye Yeik - သျှားသက်မာန်Taipei 101 - Thint Aye Yeikခင်ဗျားသာ...သေရင်... - Thint Aye Yeik - Mikeမီးခိုး - Thint Aye Yeikမြေပုံထဲမှာ မပါချင်တဲ့လမ်း - Thint Aye Yeik - ဇီဇီ" ဟိုမှာဒီမှာ " - Foreign Resident - Thint Aye Yeikယာဉ်အို စက်ဟောင်း ထိန်းမောင်းနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် - Foreign Resident - Ko chogyiကျွန်တော်နဲ့ Dead Body (0:1) - ကျော်လွင်ဖြိုး - တောတွင်းပျော်အားနာလွန်းလို့ ပါ - တောတွင်းပျော် - တောတွင်းပျော်အကျဉ်းသား Theory စဉ်းစား ဘယ်လိုချီ - Ko chogyi - Thint Aye Yeik"ေ ကာက်ရိုးမီး" - aye.kk - weiweiကျွန်တော်နဲ့ Dead Body(0:2) - ko six - ဇီဇီမတူညီသော အတွေးအမြင်များ - ko six - ကျော်လွင်ဖြိုးအဝင်ကော - ko six - Mr. MarGaအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - ko six - kaiသူမတူတဲ့ မိန်းမသားများအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် - surmi - ဦးကြောင်ကြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလေး...လာအိုသို့ - Tawwin Pan - Foreign Residentအေးခဲနေသောအနောက်နိုင်ငံကနိုင်ငံများ........... - Tawwin Pan - Thint Aye Yeikချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား - aye.kk - ဇီဇီCategory	Arts & Humanities
ကျပ်တသိန်းသို့ Top 10alinsett (96309 Kyats )Anzartone (95532 Kyats )kyeemite (91703 Kyats )weiwei (83430 Kyats )SP (81016 Kyats )padonmar (76897 Kyats )blackchaw (76343 Kyats )Foreign Resident (59119 Kyats )monmon (58624 Kyats )Northern Onestar (56676 Kyats )FB	FB